3. Job (Application Form) | Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar, Los Angeles, U.S.A
Home » Data » 3. Job (Application Form)
Requirement: Job PPT Renewal Form
(က) အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် ညွှန်ကြားချက်
– ၀င်ငွေခွန်အကျေပေးဆောင်ထားသောပြေစာ (၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ၀င်ငွေခွန် ပေးဆောင် ထားသောပြေစာ )
– ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ ( ၆ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ၊ အရွယ်အစား ၂” x ၂” ၊ နောက်ခံ အဖြူ)(ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအား ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွင် ကပ်ပေးပါရန်)
– အ‌မေရိကန်နိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားရောင်စုံမိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်၊ ဗီဇာ အ‌ထောက် အထား၊ သို့မဟုတ်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် အ‌ထောက်အထား
Download > 3. Job (Application Form)
Job PPT Renewal Form